Maalmaha qaarkood waxaa loogu talagalay denimka iyo joodaankani waxay leeyihiin qaab gaar ah iyo taam ah ultra raaxo leh. Waxaad noqon doontaa gabadhii ugu qaalisanayd ee ku taal xayndaabkan, dabacsan oo jilicsan, jilicsan oo jilicsan.
Qoorta dariiqaaga dariiqa adiga oo ku daraya kabaha xoogga leh iyo xnumX ee xNUMX ee riwaayadda t-shirt ee kuyaal haraaga buunshaha. Ama tag Grunge oo leh xajin yar iyo hoodie. Waxaad sidoo kale ku daali kartaa haanta higa hippie, Kabaha Birkenstock iyo ubaxyada ku rid timahaaga. Waxaad ku muujin kartaa naftaada siyaabo badan, adigana waa inaad adigu abuurtaa muuqaalka aad adigu.
Dharbaaxada Long Hippie ee la jiido $ 89.00
Waaweyn Tiro Waaweyn $ 60.00
Dharka Xoogan $ 89.00
Green Corduroy Guud $ 62.30 $ 89.00
Dharka dharka dharka lagu xirto ee Loose Turtleneck $ 72.00